Qalabka Aluminiumka Xargaha Dib-u-warshadaynta Qalabka Aluminium
Qalabka ugu sarreeya ee loo yaqaan '200 ^ 1500kg Induction Aluminum Scrap Melring Recycling Induction Furnace ee dib-u-warshadaynta iyo dhalaalisa xoqitaanka aluminiumka, qaloocinta, gasacadaha iyo walxaha wasakhda ah.
Aluminium aluminium / qashinka / qashinka dib u warshadeyntu waxay ku dhejin doontaa aluminium ama aluminium aluminiinka / qashin kharaj ah sida kharajka aluminiumka dhalada ee aluminiumka dibna loo dhiso foornada iyo bilawga foornada si ay u bilawdaan geedi socodka barafka. Ku darista aluminium dheeraad ah nidaamkan waxaa lagula talinayaa sida aluminium biraha u gudbiya kulaylka si fiican.
Marka heerkulka aluminiumku gaaro 1220.66 ° F waxay u muuqataa dareeraha. Qaar ka mid ah daboolka iyo rinjiga laga soo saaro gasacadaha ayaa dusha sare ku dul socon doona. Cuntadani waxaa loogu yeeraa dhoobo waxaana lagu dhejin karaa shumaca birta. Tani waxay u baahan tahay in la qaboojiyo kahor inta aan si nabadgelyo leh looga dhigin.
Marka xigta, gubashada (foornada) waxay ku shubi doontaa aluminium saafi ah. Caadi ahaan, Farsamaynta Jilitaanka Xoogsatada ah ayaa la bixiyaa si ay ugu shubaan tiro badan oo ah birta dareeraha ah.
Ugu dambeyntii, daryeelka, aluminium birta ah ayaa lagu shubi doonaa caaryada si ay u qaboojiso dabadeedna u daadiso isticmaalka.
AFaa'iidooyinka Qulqulka Aluminium Xariiqda Dib-u-warshadaynta Qalabka Qalliinka:
Nidaamka kuleylka ee fiilada korontada ee korontada ku shaqeeya waa in la isticmaalo kuleylka kulaylka, kuleylka diirada dabiiciga ah ee heerkulka sare ee mudada dheer ee isticmaalka oxidation wuxuu dhalin doonaa dhimista nolol maalmeedka, qiimaha dayactirka sicirka. Kobbinta kuleylka elektromagnetic-ka waxaa lagu sameeyey qalab kulul iyo xargo heerkulkiisu sarreeyo, sidaa darteed nolosha adeeggu waa muddo dheer oo aan lahayn dayactir.
Hoos u dhigida awoodda SMJD taxanaha Aluminium Alxamduli Alwaax Qalabka Dib-u-warshadaynta Qulqulka:
Categories Technologies Tags aluminiumka duuban foornada, foornada aluminium, Foornada aluminiinka ee aluminium, alwaax diiriye ah, foornada aluminiumka dhalaalaya, Qalabka Aluminiumka Xargaha Dib-u-warshadaynta Qalabka Aluminium, aluminiumka xoqidda qashinka dib loo warshadeeyo